के आउँदै छ प्रमुख दलको घोषणापत्रमा? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
के आउँदै छ प्रमुख दलको घोषणापत्रमा?
काठमाडौँ, ५ बैशाख- पहिलोपटक स्थानीय स्वायत्त सरकारको अभ्यास हुन लाग्दै गर्दा कांग्रेस केन्द्रले थुप्रै अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उठाउने भएको छ । लोकतान्त्रीकरणका लागि कांग्रेसले लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएको, आर्थिक विकास सामाजिक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन ल्याएकाले यस्ता विषयलाई गाउँगाउँमा पुर्याउने खालको एजेन्डा ल्याउन लागेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि ९ वैशाखमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । ‘माओवादी केन्द्रको उपहार : गाउँ–नगरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारासहित माओवादीले स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्न लागेको हो । प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गरी स्थानीय तहबाट सुझाब लिइसकेको बताइन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट आएका सुझाबअनुसार परिमार्जनसहित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ ।